နှောင်းပိုင်းတွင်ကိုယ်ဝန်အတွက်ဖြစ်ပေါ် Toxemia ဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူကရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50-60% လေ့လာသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်သူသည်အသက် 30 ပတ်ကြာပြီးတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူက 28 ပေါ်နေသောကြောင့်ဟုခေါ်တွင်၏။
Clinic, ရောဂါ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဆီးနှင့်ချို့ယွင်းဆီးမှုစနစ်သာမန်စစ်ဆင်ရေးအတွင်းပရိုတိန်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ဥပမာ, ကအတည်ပြုသည်။
နှောင်းပိုင်းတွင် toxicosis ကိုထင်ရှားစွာပြမည်သို့မသိမမှတ်ဘဲ, များစွာသောကိုယ်ဝန်ဆောင်မကြာခဏအခြားရောဂါများနှင့်အတူရောထွေးနေသည်။
အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သူ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအဆက်မပြတ်မကြာခဏ vertigo ဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည်ခေါင်းကိုက်, မျက်စိမီ "ယင်ကောင်" မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်, အားနည်းခြင်းကြုံနေရသည်။ သူတို့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှောင်းပိုင်းတွင်ကိုယ်ဝန်အတွက် toxicosis စဉ်အတွင်းအတော်လေးမကြာခဏဖြစ်သောသွေးပေါင်ချိန်အတွက်ရုတ်တရက်အပြောင်းအလဲများပေါ်ပေါက်ပါတယ်။
ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်အတွက်နှောင်းပိုင်းအဆိပ်များအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းများ, ထိုကဲ့သို့သောဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုများကဲ့သို့သောရောဂါများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်စနစ်များနာတာရှည်ရောဂါများဖြစ်ကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျနော်တို့အကောင့်ထဲသို့အဆက်မပြတ်အိပ်ပျော်ခြင်းမရှိခြင်း, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လျက်, ကိုယ်ဝန်ဆောင်၏အသက်တာ၌စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
နောက်ဆုံးမှာနှောင်းပိုင်းသက်တမ်းမှာအဆိပ်၏အဓိကပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်သည့်ဖော၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, မှဦးဆောင်မမှန်, အရည်၏ကြီးမားသောပမာဏ၏စားသုံးမှုအစာစားခြင်း။
နှောင်းပိုင်းတွင် toxicosis ၏အကျိုးဆက်များကဘာတွေလဲ?
ထိုသူတို့အဘို့အန္တရာယ်ရှိသည်အဘယ်အရာနှောင်းပိုင်းတွင် toxicosis မသိကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ, မကြာခဏသူ့ရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းဖို့လုံလောက်တဲ့အာရုံစိုက်မှုမပေးပါဘူး။ ဤအခြေအနေမှမကြာခဏနောက်ဆုံးမှာအနုတ်လက္ခဏာအဆိုပါသန္ဓေသားအနေအထားအပေါ်သက်ရောက်မှုသောချင်း၏ပြတ်တောက်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့်, ထို အောက်စီဂျင်မရှိခြင်းသန္ဓေသား တစ်ဦးမကောင်းတဲ့လမ်းကသူ့ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏သက်ရောက်သည်။
ကိုယ်ဝန် 1 အပတ်က - ခံစားချက်
ဒုတိယအကိုယ်ဝန်နှင့်ကလေးမွေးဖွား - အထူးသဖြင့်
သန္ဓေသား6ပတ်
Biamnioticheskaya monochorionic အမွှာ - ကဘာလဲ?
နှောင့်နှေးစေရန် ectopic ကိုယ်ဝန်လက္ခဏာများ
အစားအသောက် "1200 ကယ်လိုရီ"
သမီး Reese Witherspoon နှင့်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ဆံပင်အရောင်ကိုပြောင်းလဲ
ဆောင်းရာသီတွင် Raspberry Pruning
သွေးဆုံးနေစဉ်အတွင်းဟော်မုန်းကုသမှု - စာရင်း
ဟာမ vetchinnitse - စာရွက်
Saxifrage - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ
ဒင်ဗာမြို့မှရှပ်အင်္ကျီ - အဘယ်အရာကိုသူတို့ဖြစ်ကြသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဝတ်ဆင်နည်း
ပဲဟင်းဟင်းချို - စာရွက်